Qaab-soo-saareyaasha Qaab-soo-saarka Qaaska ah iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda Qaab-mudista Sare ee Shiinaha
Iyada oo la cusbooneysiinayo tiknoolajiyada cirbadeynta cirbadeynta, qaabeynta cirbadeynta saxda ah waxaa loo adeegsadaa codsiyo farsamo oo dheeri ah waxayna ku raaxeysataa faa'iidooyinkeeda habka wax soo saar mug weyn leh oo waliba kharash ah.
Sax Qalabka caaryada Warshadaha
Wax taaj oo kale duray sax waa habsocod adag oo u baahan mashiinno aad loogu kalsoonaan karo, naqshadeeyayaasha qibrada leh iyo injineero in la abuuro qaybaha sax sare si loo daboolo baahida macaamiisha, YF Mold khibrad u leh abuurista naqshado filaayo in la soosaarka maskaxda ku leh waxay ka caawisaa abuurista xalal hufan oo tayo sare leh dhammaan heerarka wareegga nolosha ee badeecada.
Yuanfang Technology waa soo saaraha ah ISO shahaado of wasakhahaasi sax in Shenzhen, Shiinaha.
In 1996, Loogu magac daray sida HanKing Caaga bilaabay caaryada samaynta iyo duro wax taaj oo kale ganacsi, In 2017, si ay ula kulmaan baahida suuqa sii kordheysa, waxaan qotomiyey warshad wax soo saarka caaryada sax sax ah, technology Yuanfang aasaasay. Waxaan u horseednay soo saarid sax ah oo sare si loo helo wax soo saar tayo sare leh oo aan qancino waqtiga hogaanka macaamiisha.
Waxaan ku ilaalineynaa sumcadda sare ee macaamiisheenna iyada oo leh DHAQANKA DULQAADKA balaastiigga ah iyo qaab-dhismeedka cirbadeynta iyo dhammaan noocyada balaastigga ah, oo ay ku jiraan MULTI-CAVITY caaryada iyo qaybaha balaastigga ah ee golaha, oo leh tayada tayada codka.
Sanadihii la soo dhaafay, annagu waan xajinnaa kor u qaadida our Gali Caar, Ka gudub, Qaab elektaroonig ah, Qaab Qalabka Caafimaadka, Qaab-godad badan, 2-Qaab toogasho ah waana ku guuleysanay inaan ku raaxeysano macaamiisheenna sumcad wanaagsan.
Sax caaryada duro
Sannado badan, wax taaj oo kale duray caag ah ayaa ahaa tiknoolajiyad wax soo saarka lagu kalsoonaan karo oo loo isticmaali karaa in lagu soo saaro wax soo saarka iyo caag kala duwan. Wax taaj oo kale oo duritaanka ah ayaa buuxiya baahiyaha warshado badan waxayna ku filan tahay wax soo saar ballaaran oo qaybo kala duwan ah, laakiin qeybaha aadka u shaqeynaya, tikniyoolajiyad cusub ayaa loo baahan yahay — saxsanaanta wax isku duro
Saxsanaanta caaryada waxay inta badan kuxirantahay saxsanaanta sare ee cabirka caqaarka, meelaynta saxda ah ee godka ama in saxnaanta dusha kala taga ay buuxineyso shuruudaha. U dulqaadashada cabbirista wasakhaha guud ee cirbadaha saxda ah waa in laga kontaroolo ka hooseeya 1/3 ee dulqaadka cabirka alaabada.
Machinability iyo rigidity. Naqshadeynta qaab-dhismeedka caaryada, tirada godadka waa inaysan aad u badneyn, saxanka hoose, saxanka taageerada iyo darbiga saabka waa inuu ka sii dhumuc weyn yahay si looga fogaado cilad-ba'an ee laastikada ah ee qaybaha ka hooseeya heerkulka sare iyo cadaadiska sarreeya.
Diidmada wanaagsan, caaryadu waa inay yareeyaan tirada godadka, yareeyaan orodka, yareeyaan orodyahanka, oo waxay leeyihiin dhammeystir ka sarreeya caaryada caadiga ah. Waxyaabaha ku saabsan qaabka saxda ah waa bir daawaha leh oo leh awood farsamo sare.
Waxyaabaha loo isticmaalo soosaarida daloolka iyo orodyahanka waa inay maraan daaweynta kuleylka adag, oo ay doortaan alaab adag oo adag (qaybo gaari kara HRC52), caabbinta xirashada wanaagsan iyo caabbinta adag ee daxalka.
Sifooyinka duro sax:
1. Qaybaha waxay leeyihiin saxnaan sare iyo dulqaad yar
2. Qaabku wuu fiican yahay oo waa adag yahay, saxnaanta cabbirka saabka, heerka dhammeystirka iyo saxsanaanta meelaynta u dhexeysa sheybaarayaasha ayaa sarreeya.
3. Isticmaal mashiinka cirbadeynta saxda ah si aad u beddesho mashiinka duritaanka caadiga ah.
4. edaab nidaamka is duritaanka sax wax taaj oo kale ah.
5. Xulo waxyaabaha la isku duro sax isaha.
Waxaan la soo saarta wasakhahaasi sax & waxyaabaha caag ah oo loogu talagalay macaamiisha si fiican u yaqaan in industry ee baabuurta, injineernimada korontada iyo elektarooniga. Waxaan nahay lammaanaha ugufiican ee soosaara qaybaha balaastigga ee saxsan. YF Mold wuxuu kula shaqeyn doonaa garabka-garabka si loo qanciyo baahiyahaaga.
Warshadda caaryada, Caaryada Custom, Wax taaj oo kale galinta caaga ah, Soosaarayaasha caaryada, Samaynta Qaab Muunad, Wax taaj oo kale duritaanka Iyadoo bir biraha,